Fianarana an-tserasera maimaim-poana: 100 taona Diplomasia Mangina, fanoherana tsy misy herisetra ary fananganana filaminana - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
[icon type = "glyphicon glyphicon-share-alt" loko = "# dd3333 ″] Tsidiho ny Global Campus an'ny USIP raha te hahalala bebe kokoa sy hisoratra anarana amin'ilay fampianarana
Nampiantranoin'ny Campus Global an'ny USIP, ireo mpandray anjara amin'ity fampianarana manokana amin'ny Internet ity dia hianatra amin'ireo mpitarika ny fiarahamonina AFSC momba ny fotoana manokana, fampielezan-kevitra ary ny zava-bita tamin'ny tantaran'ny Quaker izay mifantoka amin'ny lohahevitra momba ny fananganana hetsika, ny famahana ny antony mahatonga ny fifandonana ary ny herin'ny olona andavanandro. mamorona fanovana.
Nandritra izay 100 taona lasa izay dia niasa nanerana an'i Etazonia ny AFSC tamin'ny olan'ny raharaham-bahiny ao anatin'izany ny fiarovana ny zon'olom-pirenena sy ny politika, ny fanoherana tsy misy herisetra amin'ny ady, ary ny fiarovana ny politika fifindra-monina. Ny ezaka iraisampirenena AFSC dia manomboka amin'ny fifanakalozana isam-batan'olona amin'i Korea Avaratra ka hatramin'ny firotsahan'ny tanora any Guatemala, sy ny sisa. Na ny anatiny na ny iraisam-pirenena ny fifantohana, ny fanoloran-tenan'ny AFSC hisian'ny fandriampahalemana sy ny fahamarinana dia tsy miova. Ity fanangonana ity dia manome fijery lalina momba ny traikefa 100 taona.
Atrikasa Sesame: Mpitantana Tetikasa Senior, fiantraikany ara-tsosialy
Fanamby amin'ny fitantanana sy fandaminana fanabeazana fandriam-pahalemana sy kolontsaina fandriam-pahalemana any Nizeria
Mamafy voan'ny fandriam-pahalemana any Okraina
Desambra 29, 2019 Tatitra momba ny hetsika 0
Tamin'ny 21-23 novambra dia nisy ny atrikasa iray momba ny taranja 'Culture of Good Neighborhood', izay tanterahina any amin'ireo toeram-pampianarana any Ukraine. Ity hetsika ity dia nokarakarain'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny siansa Okrainiana ary ny ivon-toerana fampidirana sy fampandrosoana ho an'ny informatika sy fikarohana. [tohizo ny famakiana…]